Flux: gịnị bụ ngwaahịa a nke eji arụ ọrụ na ịgbado ọkụ? | Akụrụngwa n'efu
Flux: gịnị bụ ngwaahịa a eji arụ ọrụ ọkụ?
Ọ bụrụ na ị na-amụta etu esi-ịgbado ọkụ Ihe eletrọniki, ma ọ bụ maka reballing, n'ezie ị nyochaa na ịchọrọ mado nke a na-akpọ flux. Ngwaahịa a bụ onye ọbịa zuru oke nye ọtụtụ, ebe ọ bụ na a na-ejikarị tin na-eme ihe na tin a anaghị eji ihe a eme ihe, n'aka nke ọzọ, maka ndị ọzọ na-ere ya ọ bụ nnukwu enyemaka.
Na nke a ndu ị nwere ike ịmụ ihe niile ịchọrọ ịma banyere pasta a, dị ka ihe mejupụtara ya, nzube ya, otu esi etinye ya, ụdị, wdg.
1 Gịnị bụ mgbanwe?
1.1 Flux ngwa
1.2 Ofdị mgbanwe
1.3 Esemokwu dị iche na ntụgharị na ire ere ọzọ
2 Otu esi eji agbanwe agbanwe
2.1 Otu esi echekwa mgbanwe
2.2 Diskọ ihe ụfọdụ na ịkpachapụ anya maka iji ngbanwe
3 Ebee ka ịzụta mgbanwe?
Gịnị bụ mgbanwe?
Okwu bekee ntụgharị nwere ike ịtụgharị dị ka ntụgharị, na-esikwa na Latin «fluxus» nke pụtara «eruba». Ọ bụghị naanị na ejiri maka ire ere maka ngwa elektrọnik, a na-ejikwa ya n'ụdị dịgasị iche iche dị iche iche dị ka ihe na-agbapụta agbapụta ma ọ bụ ndị na-ehicha ihe, yana yana mmepụta igwe na ụlọ ọrụ igwe, ya bụ, ha na-enwe ihe karịrị otu ọrụ.
Nke mbụ oge ejiri ha wayo, potash, sodium carbonate, borax, sulfate Lead, coke, wdg. Ha nile ji na foundries ọcha ọla. Kama nke ahụ, dị ka onye na-ehicha ihe nhicha ma ọ bụ iji kwado mgbagharị ịgbado ọkụ, na-ewepụta ọfụma ka mma yana iwepu ọxịdashọn, ọ ga-amalite iji ya emechaa.
Na-elekwasị anya welder ahụ, nke bụ isiokwu masịrị anyị ebe a, ọ bụ ihu ọma mmewere (mado, mmiri mmiri ma ọ bụ ntụ ntụ) nke nwere ike igbochi nchara nke nkwonkwo, na-eme dị ka insulator site na kọntaktị nke ikuku mgbe njikọta ahụ na-ewere ọnọdụ. Maka nke a, a na-eji ngwakọta kemịkalụ dị ka fluorides, borates, borax ma ọ bụ boric acid.
Na mgbakwunye na nke a na-echebe mmetụta, na tin solders, ọ na-eje ozi na-eme ka mfe usoro, na-enweta ọla ahụ ma na-eme ka ọ dịkwuo mfe, ebe ọ na-eme ka ihe ndị mejupụtara na-agbaso nke ọma. Na, n'ezie, ọ na-emeziwanye ịdị mma nke ịgbado ọkụ, na-ezere unyi na irighiri ihe emere n'oge usoro ahụ.
Mmetụta ọzọ nke mgbanwe a bụ ịkwado ihe ala okpomọkụ welds. Nke a na-ebelata ihe gbasara nke puru omume nke ihe ndị a na-agbanye ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ emere n'oge usoro ahụ.
Na usoro nke ngwa ahụ agbanwe agbanwe, a na-ejikarị ọtụtụ ihe n'ịgbazi ngwaọrụ eletrik dịka:
Ndozi nke micro-welds, ebe ọ dị mgbagwoju anya ịga n'ihu n'ihi obere akụkụ nke ihe ndị ahụ.
SMD soldering na PCBs.
Reballing maka BGA.
Nhicha nke foduru ma ọ bụ nchara residues.
E nwere ọtụtụ ụdị agbanwe n'ahịa maka ịgbado ọkụ, onye ọ bụla nwere ọnụahịa na njirimara dị iche iche.
Ammonium bromide na-enweghị ọla dị arọ: ọ bụ ihe ngwọta mmiri nke organic ammonium bromides na free hydrobromic acid. Ha anaghị ahapụkarị ihe fọdụrụ na weld, ma ọ bụrụ na ha emee, ọ naghị akpata nhazi oghere (olulu).
Zinc chloride: ihe omuma mmiri ozo nke ammonium chloride na zinc chloride agwakọta ya na acid hydrochloric efu. Ọ na-apụ apụ maka ịdị mfe nke iji ya na ịdị irè, ọ bụ ezie na iwepu ihe fọdụrụ na-egosi nhicha ya iji zere oghere oghere (olulu).
Ngwongwo zinc: ụdị mmiri mmiri ọzọ nke zinc bromide na ammonium bromide nwere acid hydrochloric n’efu. Dị ka nke gara aga, ọ dị mfe iji, mana ọ dịkwa mfe iji wepu ndị fọdụrụ site na iji mmiri saa ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị fọdụrụ na-adị na solder, ọ gaghị akpụ oghere.
Ulo: Ọ bụ ezie na anaghị atụ aro ya, ụfọdụ ndị na-eme nnwale imepụta nnweta nke ụlọ ha. Iji mee nke a, ha na-eji ntakịrị pitch nke ha gweriri ma jiri mmanya na-agwakọta. Otú ọ dị, ụdị mgbanwe a agaghị enweta otu nsonaazụ dịka ngwaahịa ngwaahịa.
Esemokwu dị iche na ntụgharị na ire ere ọzọ
Otu n'ime obi esighị ike bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ otu ihe ahụ na-agbanwe dị ka solder paste ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere ụfọdụ iche. Eziokwu bụ na ọ gbagwojuru anya, ọtụtụ oge ngwaahịa ndị ahụ n'onwe ha na-agbagwoju anya na nkọwa ha, na-eji okwu abụọ ahụ dịka okwu. Fọdụ na-ekwu ihe dị iche, na-ekwu na ọ bụ naanị obere iche:
asọpụta: ihe kemịkalụ etinyere na ọla ka ha wee kpoo ọkụ n'otu ma melite ogo nke weld, ma ọ bụ maka ịchụpụ.
Tapawa Solder: ejiri maka ịgbado ọkụ iji kwado nrube isi nke akụkụ igwe siri ike.
Mana, dika m na-ekwu, maka ebumnuche bara uru, ịnwere ike iwere ya myiri. N'ezie, n'akụkụ ụfọdụ, a na-eji otu okwu mee ihe na ndị ọzọ. Naanị jide n'aka na mgbe ịzụrụ ngwaahịa ahụ na ọ bụghị ntụgharị ma ọ bụ mado maka pọtụ mmiri ma ọ bụ maka ngwa ndị ọzọ, yana ọ kapịrị ọnụ maka elektrọnik ...
Otu esi eji agbanwe agbanwe
Iji usoro, ma ọ bụ flux, dị mfe ma ọ bụrụ na ị na-eso usoro nke usoro. Site n'ime nke a, ị nwere ike nweta ihe kachasị mma na ngwaahịa a. Tụkwasị na nke a, ị kwesịrị iji nlezianya mee ihe, dịka iji ya n'ime ụlọ ikuku n'ihi na ọ bụ kemịkalụ nke nwere ike ịmepụta vapo, na-eyi iko na nkpuchi, yana uwe.
na Ntụziaka iji ntụgharị maka ịgbado ọkụ bụ:
Hichaa unyi ọ bụla nwere ike ịdị na mpaghara ịgbado ọkụ, ma ọ bụrụ na ọ dị.
Tinye akwa dị n’elu mmiri na mpaghara ahụ maọbụ ha abụọ. Ọ dịghị mkpa na akụkụ jupụtara ebe ma ọ bụ na ịgbado ọkụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na mpaghara ahụ dịtụ ọkụ, ọ ga-aka mma.
Mgbe ahụ, a na-eme ka ịgbado ọkụ dịka ọ ga-eme, na-adabere ma ọ bụ ịgbado ọkụ SMD, reballing, wdg.
N'ikpeazụ, hichaa mmiri ahụ.
Banyere okwu ikpeazu a, enwere esemokwu banyere ma ọ ga-ehicha ma ọ bụ. N'ezie, ọ bụghị naanị obi abụọ maka ndị ọrụ ntụrụndụ (ma ọ bụ ịgbado ọkụ ntuziaka), ọ bụkwa obi abụọ na ụlọ ọrụ (ịgbado ọkụ na-akpaghị aka). Ọtụtụ ndị nrụpụta na-eleghara akụkụ post-mmepụta site na enweghị ngwaọrụ na-akpaghị aka maka ya na ịdabere na arụmọrụ nke igwe eji arụ ọrụ iji mepụta nkwonkwo na ịdị ọcha zuru oke.
Kama nke a, echiche ụgha nke nchekwa a nwere ike iduga nleghara anya nke mmetọ electrochemical emepụtara na ụfọdụ mmiri yana nke ahụ anaghị ebute mmetụta na-adịghị mma, ọ bụ ezie na ọ ga-akwụsị ọdịda ogologo oge.
Mgbe eji ya agbanwe agbanwe isi solder waya ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe, ntụgharị a na-abụkarị resin siri ike nke nwere agbaze dị elu karịa ọla nke gbara ya gburugburu. N'ime ụdị welds ndị a, mgbe ngwụcha nke welder ahụ metụrụ waya ahụ, ntụgharị ahụ na-aghọ mmiri mmiri ma gbasaa na workpiece. N'ụzọ dị otú a, ọla a wụrụ awụ na-agbaso okpomọkụ na ntụgharị, na-eme njikọ. Dika enwere ike ighota, ebe o choro ikpo oku iji gbazee, ihe ojoo nke ibute oria di ala ...
N'aka nke ọzọ, nke a abụghị ikpe na usoro ntanetị ndị ọzọ ebe etinyere ọtụtụ ihe n'ihi njirimara nke solder, dịka SMD. Otú ọ dị, e nwere ngwaahịa «Ọ dịghị ọcha» liquids nke na-achọghị nhicha, mana ọ dị mkpa ikpo ọkụ iji mee ka ha ghara ime ihe.
Enwere otutu mmiri ma ọ bụ nhicha ngwaahịa, dị ka ihe mgbaze dị ka mmanya isopropyl (IPA), yana wipes, swabs, wdg. Ikwesiri iji nlezianya gụọ ntuziaka ndị na-emepụta ihe na-agbanwe agbanwe maka iji ya na ndụmọdụ iji chọpụta ụzọ ziri ezi.
Ọmụmaatụ, mgbe ị na-eme ịgba ọkụ zuru oke, nke ahụ ga-ekwe nkwa, mana ọ bụghị na usoro ndị ọzọ ebe a na-eji ntanye ma ọ bụ reballing ahọrọ. N'ọnọdụ ndị ahụ, okpomọkụ a na-enweta n'ime obodo nwere ike ọ gaghị ezuru gbadaa triggers nke chemical ma mee ka ọ ghara ịmalite. Na nke ahụ bụ nsogbu maka ihe fọdụrụ na mpụga mpaghara mpaghara weld ma ọ bụ gbasaa n'okpuru ma ọ bụ karịa.
Otu esi echekwa mgbanwe
Ozugbo ị mechara iji mgbanwe ahụ, ka e wee chekwaa ya nke ọma ị kwesịrị:
Hapụ ntụgharị ahụ na karama mbụ ya wee mechie ya nke ọma.
Akpati gha agha ihu otu mgbe, na-ezere ichekwa ya iru.
Nọgidenụ na ebe dị jụụ, obere okpomọkụ ahụ, ka mma. Hapụ ya na ebe akọrọ ma ọ bụ na okpomọkụ dị elu kwesịrị izere ma ụgwọ niile.
Ọ bụrụ na ịchekwara ya na ebe dị ala (5-6ºC) dị ka ụfọdụ ndị na-emepụta na-adụ ọdụ, tupu iji ya eme ihe ọzọ ị ga-ahapụ ya na ụlọ okpomọkụ ihe dịka awa 6 iji ruo ọnọdụ kachasị mma maka ojiji.
Diskọ ihe ụfọdụ na ịkpachapụ anya maka iji ngbanwe
Fluxes ma ọ bụ agbanwe agbanwe agbanweghị mgbaka, ọ bụ ezie na uru ha na-eme ka ha baa uru. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ kemịkal na-adịkarị njọ ma na-akpata nhụjuanya n'ime ihe ndị ahụ. Ndị ọzọ nwere ike ịmepụta nnyonye anya ụfọdụ na ihe ndị ahụ, na-egbochi ụfọdụ.
O nwekwara ike ịbụ ikpe nke nje akụkụ dị nro, dị ka ụfọdụ nlegharị anya, laser diode facets, usoro MEMS, switches, wdg. Nsogbu ọzọ bụ na ụfọdụ kemịkalụ dị na mmiri ndị nwere ike ịgbanye mmiri, dị ka polyethylene glycol, na-ebute mmebi nke ngwongwo nkelectlect nke akwa nke sekit na-ebipụta.
Na sekit dị elu, ihe ndị na-agbanwe agbanwe nwekwara ike ịkpata nsogbu ụfọdụ. Ọ bụ ọbụna a hụrụ na ụfọdụ ọ nwere ike ime ka electromigration nke njikọ na guzobe aji site ionic residues, n'elu mmiri ha na-akpata na echiche ọjọọ voltaji.
Tupu m adọ aka ná ntị banyere nchebe tupu iji kemịkal ndị a, nke ahụ bụ na ogige ndị na-agbanwe agbanwe nwere ike ịnwe mmetụta ọjọọ nke ahụike. Ihe mgbaze achọrọ maka nhicha na-emerụ ahụ, nke nwekwara mmetụta gburugburu ebe obibi.
M kwughachiri na ọ dị mkpa na-eyi ugogbe anya, nkpuchi na uwe maka njikwa. Emeghị otú ahụ nwere ike ibute nsogbu ahụike site na nsonye ogologo oge, dịka ọmụmaatụ, anwụrụ ọkụ rosin. Nke ahụ nwere ike ịkpata ụkwara ume ọkụ na ndị mmadụ nwere mmetụta karị.
Na anya ma ọ bụ akpụkpọ o nwekwara ike ịkpata nsogbu. N'ezie, mgbanwe ndị a na-arapara n'ahụ anụ ahụ ma nwee ike ịnyefe ọkụ nke ọma, na-akpata ọkụ.
Ebee ka ịzụta mgbanwe?
N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta mgbanwe, ị nwere ike ịchọta ya na ezigbo ọnụahịa n'ọtụtụ ụlọ ahịa elektrọnik pụrụ iche. Ndị a bụ ụfọdụ aro:
JBC mmiri na-agbanwe agbanwe
Flux Hilitand anaghị emebi emebi maka PCB, BGA na SMD.
Nduzi na-enweghị ndu na sirinji usoro.
Nkedo waya maka ndu-free solder na rosin isi (agbanwe agbanwe).
Lablọ nyocha CS Lab maka sirinji reballing.
Flux tapawa na-enweghị nhicha (Ọ dịghị ọcha) na sirinji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » Flux: gịnị bụ ngwaahịa a eji arụ ọrụ ọkụ?
OpenExpo Virtual Ahụmahụ 2021: Ikwesighi ịhapụ ya!